Ranjo tratran’ny “crampes” matetika : savony no vahaolana …
Zazakely voan’ny nendram-boalavo… ampandroy amin’ny karibaonetra
Ny karibaonetra dia isan’ny akora natoraly tena mandaitra hanasitranana ny nendram-boalavo. Mampitony ny hidihidy aterak’ity aretina ity izy io. Mampijanona ny fanaintainana ihany koa ary manakana ny zaza ny hihoatra ny vatany.
Manamboatra lokomena ody vakivaky
Efa ao anatin’ny vanim-potoana mangatsiaka isika. Raha vao hatsiaka no resahina dia isan’ireo lasibatra ny molotra, noho izy mora marefon’ny rivotra izay misy hamandoana,
Zazakely voan’ny sery… andramo ity
Ø Apetraka ambony lovia fisaka ny tongolo ary zaraina roa. Ø Apetraka ao ambany fandrianan’ny zazakely mba hampisokatra ny lalan-drivotra ka hanasitrana ny sery.
Mety hampisy “herpes” ny lokomena
Tena zava-dehibe ho an’ny fahasalamana ny fahadiovan’ny akora ampiasaina. Raha ny lokomena fotsiny izao no maloto, dia mamboly fahapotehin’ny molotra ianao.
Mampiakatra nono amin’ny « fenouil »
Isan’ny akora antsoina hoe : « galactogène » ny « fenouil ». Mampiakatra ny tsirim-panentana izay manampy amin’ny famokaran’ny vatanan’ny vehivavy ronono izy io.
Mampangirana volo amin’ny « coca-cola »… izao atao
Ø Kobanina amin’ny « coca-cola » ny volo mialoha ny hanasana loha. Ø Avela eo mandritra ny 5mn.
Zazakely maniry nify… ampandroy amin’ny rano matimaty
Ø Mba hampitony ny fanaintainan’ny zaza rehefa maniry nify ka mahatonga azy ho sorena dia azo ampitoniana azy ny fandroana amin’ny rano matimaty.
Amin’ny alina, rehefa maka aina ny vatana vao tena miseho ny « crampes » eo amin’ny ranjo. Maro ny antony mety mahatonga izany toy ny aretina mitaiza, ny rarin-tsaina, ny harerahana, sns. Mitarika tsy fahampiana manezioma ireo ka izay no mahatonga ny “crampes”. Tena manimba ny torimaso izay ilain’ny vatana sy ny saina izy io. Ny savony dia afaka misoroka izany.
- Tsy tena voaporofo ara-tsiantifika ity paipaika iray ity ary maro ireo efa nanandrana izany ka nahita voka-tsoa. Raha ny fanazavan’ireo mpitsabo dia ny manezioma ao anatin’ny savony no mahatonga azy ity handaitra.
- Mialoha ny hatory dia asiana savony eo ambony fandriana, ary atao eny amin’ny faritra manakaiky ny tongotra izany.
- Fonosina miaraka ao anaty lamba ao ny tongotra sy ilay savony avy eo, ka hibohana ao. Tsy esorina raha tsy maraina ny andro.
- Ny tena tsara dia ireny “savon de Marseille” ireny no ampiasaina amin’izany.